Diuterọnọmi 3 | Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl | Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ (2007)
3 “Anyị wee tụgharịa si n’ụzọ Beshan gbagoo. Ọg+ eze Beshan wee pụta, ya na ndị ya niile, ibuso anyị agha n’Edriaị. 2 Jehova wee sị m, ‘Atụla ya egwu,+ n’ihi na m ga-enyefe ya na ndị ya niile na ala ya n’aka gị; mee ya ihe i mere Saịhọn+ eze ndị Amọraịt, onye biri na Heshbọn.’ 3 Jehova bụ́ Chineke anyị wee nyefee Ọg eze Beshan na ndị ya niile n’aka anyị, anyị wee na-ebuso ya agha ruo mgbe ọ na-adịghị onye dị ndụ fọdụụrụ ya.+ 4 Anyị wee weghara obodo ya niile n’oge ahụ. Ọ dịghị obodo anyị na-anapụghị ha, obodo iri isii,+ bụ́ ógbè Agọb+ dum, bụ́ ala dị na Beshan+ nke Ọg chịrị. 5 Ha niile bụ obodo e ji mgbidi dị elu, ibo ụzọ na ihe ntụchi wusie ike, ma e wezụga ọtụtụ ime ime obodo. 6 Otú ọ dị, anyị bibiri ha,+ dị nnọọ ka anyị mere Saịhọn eze Heshbọn, mgbe anyị bibiri obodo niile, ndị ikom, ndị inyom na ụmụntakịrị.+ 7 Anyị chịkwaara anụ ụlọ niile, burukwa ihe niile anyị kwatara n’obodo ndị ahụ.+ 8 “N’oge ahụ, anyị naara ndị eze abụọ nke ndị Amọraịt+ bụ́ ndị nọ n’ógbè Jọdan ala a, malite n’iyi ndagwurugwu Anọn ruo n’Ugwu Hemọn; 9 (ihe ndị Saịdọn na-akpọ Hemọn bụ Siriọn,+ ndị Amọraịt na-akpọkwa ya Sina,)+ 10 obodo niile ndị dị n’ala dị larịị nakwa Gilied dum na Beshan dum ruo Saleka na Edriaị,+ bụ́ obodo ndị dị na Beshan bụ́ ala Ọg chịrị. 11 N’ihi na ọ bụ naanị Ọg eze Beshan fọdụrụ ndụ n’ime ndị Refeyim fọdụrụnụ.+ Lee! E ji ígwè rụọ ihe o ji ebu ozu. Ọ́ bụghị na Raba+ nke ụmụ Amọn ka ọ dị? Ọ dị kubit itoolu n’ogologo, dịrịkwa kubit anọ n’obosara, ma e jiri kubit nkịtị tụọ ya. 12 Anyị wee weghara ala a n’oge ahụ; enyewo m ụmụ Ruben na ụmụ Gad+ ala malite n’Aroa,+ nke dị n’akụkụ iyi ndagwurugwu Anọn, na ọkara ógbè Gilied nke bụ́ ugwu ugwu nakwa obodo ya dị iche iche. 13 Enyewokwa m ọkara ebo Manase ebe fọdụrụ na Gilied+ nakwa Beshan+ dum nke dị n’alaeze Ọg. Ógbè Agọb+ dum nke dị na Beshan dum, ọ̀ bụ na a dịghị akpọ ya ala ndị Refeyim?+ 14 “Jeya+ nwa Manase weere ógbè Agọb+ dum ruo n’ókè ndị Geshọ+ na ndị Meaka, o wee jiri aha ya gụọ obodo nta ndị dị na Beshan aha, ya bụ, Havọt-jeya,+ ruo taa. 15 Ọ bụkwa Mekia+ ka m nyere Gilied.+ 16 M nyekwara ụmụ Ruben+ na ụmụ Gad ala malite na Gilied+ ruo n’iyi ndagwurugwu Anọn, etiti iyi ndagwurugwu ahụ bụkwa ókè ya, ruo Jabọk, bụ́ iyi ndagwurugwu nke bụ́ ókè nke ala ụmụ Amọn;+ 17 nakwa Araba na Jọdan na ókè ya, malite na Kineret+ ruo n’oké osimiri Araba, Oké Osimiri Nnu,+ n’ala ala mkpọda Pisga+ nke dị n’ebe ọwụwa anyanwụ. 18 “M wee nye unu iwu n’oge ahụ, sị, ‘Jehova bụ́ Chineke unu enyewo unu ala a ka ọ bụrụ nke unu. Unu ga-akwadebe, unu ndị dike niile,+ wee gafee n’ihu ụmụnne unu, bụ́ ụmụ Izrel. 19 Ọ bụ naanị ndị nwunye unu na ụmụntakịrị unu na anụ ụlọ unu ga na-ebi n’obodo ndị m nyere unu (amaara m nke ọma na unu nwere nnọọ ọtụtụ anụ ụlọ), 20 ruo mgbe Jehova ga-eme ka ụmụnne unu zuru ike, dị ka unu onwe unu, ha enwetakwa ala ahụ nke Jehova bụ́ Chineke unu na-enye ha n’ofe Jọdan; e mesịa, onye ọ bụla n’ime unu ga-alọghachi n’ihe nketa ya nke m nyere unu.’ 21 “M wee nye Jọshụa+ iwu n’oge ahụ, sị, ‘Anya gị na-ahụ ihe niile Jehova bụ́ Chineke unu mere eze abụọ ndị a. Otú ahụ ka Jehova ga-eme alaeze niile unu ga-agafe n’ebe ahụ. 22 Unu atụkwala ha egwu, n’ihi na ọ bụ Jehova bụ́ Chineke unu na-eburu unu agha.’+ 23 “M wee rịọ Jehova ka o meere m amara n’oge ahụ, sị, 24 ‘Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova, gị onwe gị amalitewo ime ka ohu gị hụ ịdị ukwuu+ gị na ogwe aka gị dị ike,+ n’ihi na ònye bụ chi n’eluigwe ma ọ bụ n’elu ụwa nke na-eme ụdị ihe ndị ị na-eme, nke na-arụkwa ụdị oké ọrụ ndị ị na-arụ?+ 25 Biko, ka m gafee hụ ezi ala+ ahụ nke dị n’ofe Jọdan, bụ́ ọmarịcha ógbè a nke bụ́ ugwu ugwu+ nakwa Lebanọn.’+ 26 Jehova nọ na-eweso m iwe n’ihi unu,+ o geghịkwa m ntị; kama Jehova sịrị m, ‘O zuworo gị! Agwakwala m okwu banyere ihe a ọzọ. 27 Gbagoo n’elu Pisga+ ma lepụ anya n’ebe ọdịda anyanwụ na n’ebe ugwu na n’ebe ndịda nakwa n’ebe ọwụwa anyanwụ were anya gị hụrụ, n’ihi na ị gaghị agafe Jọdan a.+ 28 Mee Jọshụa onye ndú,+ gbaakwa ya ume ma mee ka ọ dị ike, n’ihi na ọ bụ ya ga-ebutere ndị a ụzọ mgbe ha na-agafe,+ ọ bụkwa ya ga-eme ka ha nweta ala ahụ ị ga-ahụ.’ 29 N’ime oge a dum, anyị bi na ndagwurugwu dị n’ihu Bet-piọ.+